Dhaqdhaqaaqa Nadaafadda Jardiinooyinka iyo Gawaarida Gaadiidka Dadweynaha ee Başkent | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraDhaqdhaqaaqa Nadaafadda Jardiinooyinka iyo Gawaarida Gaadiidka Dadweynaha ee Başkent
12 / 03 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, SAWIRADA, GUUD, WADADA, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Metro, TURKEY
Wacyigelinta nadaafadda laga soo qaado beeraha iyo gaadiidleyda dadweynaha ee caasimada
Magaalada caasimada ah waxaa sii wada la dagaalanka cudurada faafa. Faafinta iyo shaqada jeermis-ka-qaadista waxaa lagu fuliyaa dhibco fara badan laga bilaabo nidaamyada tareenka illaa basaska, min AŞTİ ilaa qaybaha adeegyada Dawladda Hoose, laga bilaabo aagagga madaddaalo illaa dhismayaasha hay'adaha aan dawliga ahayn ee bixiya adeegyada guud. In kasta oo shaqooyinka jeermiska looga labanlaabmay miisanka dhibaatada ayaa waxaa aasaasay Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş, habka hawada qallalan (Qaabka loo yaqaan 'pulvarization)' ayaa la bilaabay in loo isticmaalo gaar ahaan ka saarida bakteeriyada iyo fayraska ANKARAY, Metro, Cable Car iyo Basaska.
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara ayaa kordhisay muhiimadeeda ku aaddan la dagaallanka cudurrada faafa.
Iyadoo la amrayo cudurka faafa, oo wax ku ool ah adduunka oo dhan, iyadoo la adeegsanayo tilmaamaha Duqa Magaalada Mansur Yavaş, daraasadaha jeermiska iyo jeermisyada ee muwaadiniinta, gaar ahaan gaadiidleyda dadweynaha, ayaa labanlaabmay.
Dowladda Hoose ee Magaaladu waxay abuurtay miis xiisadeed oo ka dhex jira la-dagaallanka cudurrada faafa waxayna si feejignaan leh ula galeen dhammaan qeybaha la xiriira.
NADIIFINTA DACWADA LAGU SAMEEYO
Dawlada Hoose, Magaalada oo dhan iyadoo leh tabo kala hormarin caafimaadka bulshada;
Nidaamyada Tareenka (ANKARAY, Metro, Cable Car)
-Egoga iyo Gawaarida Dadweynaha ee Gaarka loo leeyahay iyo Minibaska
-Magaalada Dib udajinta,
waxaan bilaabay jaceylka
- Dhismaha Adeegga Dawladaha Hoose ee Magaalada,
-Xarumaha Awoodda leh,
- Goobaha iibinta rootida dadweynaha
Wuxuu sii wadaa inuu ku faafayo 7/24 kooxaha nadiifinta.
QODOBADA CUSUB AYAA LA ISTICMAALAY
Dawlada Hoose ee Magaaladu waxay bilaabatay inay adeegsato habab cusub oo ku saabsan daraasadaha ka-hortaga cudurada ee laga fuliyey goobaha dadweynaha, oo ay ku jiraan xarumaha iyo degmooyinka.
Isagoo ku nuuxnuuxsaday inay isticmaalaan alaabada dawooyinka jeermiska dila ee ay ansixisay Ururka Caafimaadka Adduunka iyo Wasaaradda Caafimaadka, oo aan qatar ku ahayn caafimaadka bulshada, Seyfettin Aslan, Madaxa Waaxda Arimaha Caafimaadka, ayaa sheegtay inay bilaabeen inay adeegsadaan habab cusub dagaalka lagula jiro bakteeriyada iyo fayraska, gaar ahaan nidaamyada tareenka iyo basaska:
Waxaan sii laba jibaarnay dadaalkeena nadiifinta iyo ka hortaga cudurada faafa ee ka dhanka ah cudurada faafa adoo amar ku bixiyay madaxweynahayaga, Mudane Mansur Yavas. Hadda waxaan ka qaadaynaa tallaabooyin cusub aragti cusub. Waxaan bilownay inaan isticmaalno nidaamka cusub, oo la jiido, tusaale ahaan hawo qalalan Waxaan hubineynaa in gawaarida metrooga iyo basaska ay qariyeen qiiq sida xariga filimka. Waxaan cabirnaa cufnaanta fayraska anagoo sameynayna cabbirro si looga saaro bakteeriyada iyo fayraska. Waxaan runtii aragnay in habkani yahay mid wax ku ool ah. Qaabkan, waxaan ka dhigi doonnaa dhammaan baabuurta iyo basaska inay amaan ahaadaan. Waxaan ku sii wadaynaa howshan waqtiyo kala duwan. ”
QORSHAHA HYGIENE FADLAN EE FOLK BREAD
Iyada oo nadaafadda ay ka shaqeyso rootiga rootiga iyo waxyaabaha ay maalin walba cunaan ee caasimadda ayaa si habsami leh loo fuliyaa, Sarkaalka Howlgalka Halk Bread iyo Injineer Cuntada Murat Şanlı ayaa sheegay in ay dardar geliyeen howlaha nadaafadda ee goobaha iibka Warshadaha iyo aagagga wax soo saarka.
Isagoo sheegay in ay sameeyeen digniino muhiim ah oo ku saabsan caafimaadka shaqaalaha iyo muwaadiniinta, ayuu yiri Şanlı, “Waxaan dhowaan kordhinay taxadarka iyo kontaroolada aagagga wax soo saarka warshadeena iyo goobaha iibka iyadoo ay ugu wacan tahay halista cudurka faafa. Marxaladan, ma aqbalno codsiyada booqashooyinka warshaddeenna. Nadiifinta guud waxaa loo sameeyaa si caadi ah, laakiin gaar ahaan kiishashka rootida waxaa lagu daadiyey mashiinno uumi gaar ah. Waxaan bilownay inaan ku isticmaalno jeermis-dileyaasha gacmaha caafimaadka shaqaalaheena iyo shacabka. Waxaan sidoo kale dhignay calaamadaha digniinta meelaha banaan. Marka lagu daro meelaha wax lagu cuno, miisaskeena waxaa lagu nadiifiyaa xalka gaar ah. Rootidayadu waa kuwa aad u nadiifsan oo caafimaad qaba maxaa yeelay waxaa lagu kariyaa kuleyl aad u sareeya. Rootigayaga wax soo saarka ilaa shixnadaha waxaa keena shaqaalahayaga dhammaan qeybahayaga iyaga oo xirta galoofiska, lafaha iyo daboolista kabaha ”.
FARSAMADA FARSAMADA XARUNTA NOLOSHA QOYSKA EE DUGSIYADA
Nadiifinta shaqooyinka waxaa lagu fuliyaa iyadoo la isticmaalayo alaabada dawooyinka jeermiska lagu buufiyo ee aan ahayn xarumaha oo keliya laakiin sidoo kale waaxaha magaalooyinka waaweyn.
Hoolalka isboortiga, fasallada, musqulaha, jikada iyo meelaha dadka lagu wada nool yahay ee ku yaal Xarumaha Nolosha Qoyska, gaar ahaan Agaasinka Hawlaha Gobolka ee Polatlı ASKİ, ayaa si nadiif ah loo nadiifiyaa.
Waaxda Ilaalinta iyo Xakamaynta Deegaanka, waaxda arrimaha caafimaadka iyo kooxaha BELPLAS ayaa adkeeyay daraasadaha jeermiska ka hortagga ah ee ay iska kaashadeen Rugta Caafimaadka Ankara.
Kooxaha Dawladda Hoose ee Magaaladu waxay sidoo kale ka fuliyaan hawlo nadaafad-darro ah iskuulada, suuqyada wax lagu kala iibsado, masaajidada, xarumaha xisbiyada siyaasadeed, iyo dhismayaasha aan dowliga ahayn ee Ankara, iyagoo wata 60 gaadiid iyo 205 shaqaale ah.
Gawaarida caasimaddu ma ku dhacdaa Bursa?
Shirka Soodhaweynta ee Suuq-geynta Caasimada
Opera Bridge ee caasimadda Sababo La Xiriirinta Dayactirka, 22.00 ayaa sidoo kale la xirayaa Gaadiidka
YHT saddex magaalo ilaa caasimadda
Cabbiraad deg deg ah oo loogu talagalay Muuqaalada Musharaxiinta ee caasimadda
Laynka Jaalaha ee Metro, Street iyo Square ee Capital ayaa isbedelaya
Gaadiidka dadwaynaha ee Trabzon 1 13 Malaayiin Milkiilayaasha ah ayaa qabtay sanad
Maanta taariikhda: 12 Maarso 1911 Baghdad Railways